Qarahey.com:Xaflad xidhitaan oo loo qabtay hal Urur oo ka mid ah CWXO qaybta Gorgor oo dhamaystay tabobar ciidan oo mudo bil ah uga socday Dugsiga Faarax Cali Xaydar – Rasaasa News
Aug 7, 2010 Jwxo-shiil, Qaaxo, Qarahey.com:Xaflad xidhitaan oo loo qabtay hal Urur oo ka mid ah CWXO qaybta Gorgor oo dhamaystay tabobar ciidan oo mudo bil ah uga socday Dugsiga Faarax Cali Xaydar., xiniin
Hal kudhaga sanadkan Janan Jwxo-shiil ” ma doonayo in ay nabad ka dhacdo Ogadeeniya waligeed “BBC.” Wadaha Qorahey.com, waa doqon waana damiin ama wuu waalan yahay. Dadweynaha Somalida Ogadeeniya inta yar ee Qaxday mooyee waxay ku nool yihiin oo ay ku ceeshaan dhulka Somalida Ogadeeniya, in kasta oo ay jiraan dhibaatooyin dib u dhac oo la fac tirsaday dhulka iyo dadkaba.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya miyi iyo magaalaba way isku xidhan yihiin oo waxa magaalada ka jira reer miyigu way og yihiin, waxa miyiga ka jiran magaaladu way og tahay. Magaalooyinka Somalida Ogadeeniya badankoodu waxay leeyihiin isgaadhsiin wax kasta oo dhacan muddo gaaban ayaa lagu ogaan.
Iyada oo ay sidaas tahay, ayaa waxaan aad ula yaabaa kolka aan akhriyo warar micno la aan ah oo ay qoraan boggaga aan nahda lahay ee uu Janan Jwxo-shiil, jahawareeriyey dhalin yar aan dhigan dhaafina dhadhanka aqoonta.
Waxaan is idhaahdaa dadkani ma guri mugdi ah ayey ku jiraan oo indhaha iyo dhagahaba way ka xidhan yihiin. Waxaan kolna isweydiiyaa miyeyna dadkani ehel lahayn, wax u sheega oo yidhaahda wax aad sheegaysaan wuxuu dib ugu soo noqon Aabihii iyo Hooyadii idin dhalay oo aan filayo in ay sharaf lahaayeen.
Waxaan hubaa in Somali oo dhan ay fajacdo kolka ay si kadis ah ku galaan boggagan uu Jwxo-shiil, u sheego in ay wax lala yaabo oo been ah qoraan. Wax kale iska daayoo waxaa beenta Janan Jwxo-shiil iyo kuwa uu ku adeegto haatan khaatu bilaahi ka taagan wargaysyada aduunka.
*Ciwaanada ay boggaga ku xardhaan waxaa ka mid ah; wararkii ugu dambeeyey dagaaladii todobaadkan ka dhacay Ogadeeniya, kolkaas ayey safi 12 goobood oo dagaal ka dhacay oo waliba lagu halaagmay. tolow ma dagaal jin dhex maray oo uusan insigu ogaan karin ayey iyagu arkaan.
*Waxaa kale oo ay qoraan sidan; xeryaha tababarka ee Ogadeeniya ayaa lagu soo gabagabeeyey horimo ciidan ah oo uu tababar uga socday mudo xeryahaas. Eebahay baa igu ogg oo in uu wax u dhiman yahay Qaaxo iyo Cali-xiniin oo aan u malaynayo in ay Isbitaalka waalida ku jiraan dawlada Australiana ay u dhigtay PC si loo kontarool ficilada kale dambiga ah ee ay ku samayn lahaayeen dalkaas.
Waxaa la yidhaahdaa “foolxumadu ma xishooto” Dambiil Jwxo-shiil-na beenta iyo waji xumada waa uu ku raaxaystaa. Beenta uu ku raaxaystana waxaa aduun aan jirin ka sheekeeya ee Qorahey.com [building castle with a deck of cards].
Farax Cali Xaydar: waa wiil uu dhalay Calixaydar, Maxamed Ismaaciil walaalkiisii ka weynaa, wuxuu ku riyoonayaa wiilkaas oo magac weyn yeeshay xero ciidana lagu magacaabay. Maskiin!